Ngwa ọdịnala nke ọnwa: February 2016 - News Ọchịchị
Ngwa ọdịnala nke ọnwa: February 2016
The Observer si apps-enyocha-atụ aro 10 ngwa ọdịnala na 10 mobile egwuregwu ọ chọpụtara nke a ọnwa, si Lonely Planet-eduzi gị nwere ike na-echekwa offline ka a egwuregwu na-enye gị ohere na-agba ọsọ a akụkọ
Isiokwu a na-akpọ “Ngwa ọdịnala nke ọnwa: February 2016” e dere site Stuart Dredge, n'ihi na The Observer on Monday 15 February 2016 08.00 UTC
-Eduzi BY Lonely Planet
Ndị ọhụrụ ngwa n'ihi na ndị njem si Lonely Planet, a na-eme ezi - na free! - Ọrụ nke na-ebufe ụfọdụ n'ime obodo nduzi ya akwụkwọ na obere enyo. Ọtụtụ obodo ndị dị na igba egbe, na map na i nwere ike na-echekwa offline - a bara uru aka.
Ọtụtụ Mac ọrụ marawo ozi ikuku si nkwafu desktọọpụ email software maka mgbe. Ugbu a, ọ na-nwetara ihe magburu onwe version maka iPhone. Ọ na-arụ ọrụ na ọtụtụ na-ewu ewu email ọrụ, nwere ọtụtụ atụmatụ na adị igbe mbata gị management, na ọbụna nwere a mma n'anya Apple Watch ngwa.
A magburu onwe ya ụmụ ngwa kemgbe maka a mgbe on iOS, ma dị ọhụrụ na Android. Ọ bụ kenkwukorita mkpụrụ okwu mere maka touchscreens, na eserese egosi okwu maka ụmụaka ka ha na enweta na swipe ụzọ ha site na akwụkwọ ozi.
Ọzọ ngwa belatedly-eme ka ụzọ on ka Android, a bụ nke crowdfunding ọrụ Kickstarter. Ọ bụ oké ụzọ na-agagharị ọhụrụ oru ngo na-agbalị iji nweta ego, nakwa dị ka ịhụ ihe na enyi na-akwado.
E nwere ọtụtụ ngwa ọdịnala na Ngwa - na mgbe Ngwa na ngwa ọdịnala - n'ihi na nsuso gị nzọụkwụ na-enyere ị na-arụ ọrụ karị. Movesum bụ a smart ighikota, na-egosi otú ọtụtụ calories gị na-eje ije ka ọkụ, na-agba ume ka ị na-agụgharị gị kwa ụbọchị ihe mgbaru ọsọ.
A ohuru music ngwa si Apple, ma n'ihi na Ndekọ songs kama ige ha ntị. Iji na songwriters niile etoju, ọ na-enyere gị ndekọ songs ma ọ bụ obere echiche, tinye a virtual oku igba na bassist; ịkpado na Obere vidiyo-ahụ na ha mgbe e mesịrị; mgbe ahụ mbupụ ma ọ bụ ịkọrọ ha.
MGBE: ONE egwuregwu kwa ụbọchị
Tinder bụghị nanị ngwa na obodo maka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ozugbo si schtick bụ na ọ na-atụ aro na ị na otu egwuregwu ụbọchị ọ bụla: i nwere ike na-ahụ ibe ha, na nkwa nke ụmụ mmadụ matchmakers kama dị nnọọ algọridim n'inye aka.
Playlist A ỤBỌCHỊ
"Otu ụbọchị 'bụ nnọọ ihe isiokwu a ọnwa. Nke a na-eji ngwa na-abịa site Warner Music Group, anapụta a ọhụrụ music playlist ọ bụla 24 awa. Ị ga-mkpa ka a na-akwụ ụgwọ Spotify ụtụ magazin iji ya, na-atụ anya ọtụtụ Warner si artists ka feature.
Millie MAROTTA NDỊ COLOURING Njem Ihe Egwu
Wepụ anya ugbu a ma ọ bụrụ na-emekarị n'ihi okenye akwụkwọ agba? Ọkọkpọhi gị ewu: a na-ewe echiche na-iPad. The foto na ị na-agba? Mara mma, ezie na: ọdịdị oyiyi si ọrụ illustrator Millie si ewu ewu akwụkwọ. Ọzọ égwu na-eme ya, ma nke a na-ele ihe ndị kasị dị ka ezigbo agba?.
Ọ bụghị ihe niile na-arụ ọrụ na Microsoft: na tech ibu si ibuo ngwa ọdịnala otu nwere ọhụrụ ụzọ ka ị na-eteta. Iji gbanyụọ ngwa si mkpu elekere, ị ga-"ejije" ihe: site Anam Udeme a ụfọdụ iru-ekwu otu okwu. -enweghị isi na? A bit, ma ọ dịghị eteta gị elu.
– Ịgba Cha Cha APPS –
Nkọwa ka a "crafting RPG" pụrụ ichetara gị Minecraft, ma Crashlands bụ a dị iche iche anụ ọhịa. Mgbe okuku-ọdịda na ọbịa na mbara ala, i nwere ka forage ngwaọrụ, agha anụmanụ na-ewu gị isi mgbe igwupụta oké ọgba akụkọ. A ezigbo emeso.
Ọ bụrụ na ị na-amasị puzzlers ma na-agwụ ike nke egwuregwu na atọ "Saga" usoro, Abụọ Inc bụ ihe ngwọta. Ọ na-ahụ gị n'ịkpọ edoghi acha n'ámá jiri mkpịsị aka jupụta elu Ogwe na elu ihuenyo, megide esiwanye siri ike "Nkea" ókè. Original, na nnọọ na-eri ahụ.
IHE WESTPORT Independent
akwụkwọ, Biko-anọgide na otu n'ime ihe ndị kasị-akpali iche echiche mobile egwuregwu, na a na-ebipụ si na otu ákwà. Ị dezie a akwụkwọ akụkọ dị na a "agha" mba eji n'ime ọchịchị aka ike, na nwere na-gbanwee n'akwụkwọ akụkọ na onye nnyocha akụkọ dị ka ị na-ahụ ihe kwesịrị ekwesị. ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị obi ike, -ahapụ ha ...
Ọ bụrụ na ị toro na oge nke ụdịdị dị iche iche n'ụlọ kọmputa, Downwell si ochie ndịna-emeputa ga-eme ka ihe ụfụ nke nostalgia. Ma ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ya mfe ma nkọ na-ada-ala-a-ọma gameplay ga-adịghị anya ya ọgwụ na ị. Ike-acha ọkụ ekere òkè bụ isi dị ka ị na-egwu, -anwụ ma na-ekpeghachi.
-Etiwapụ kittens bụ a quirky kaadị egwuregwu na e kwụrụ ụgwọ ka akụ nke $ 8.8m on Kickstarter. Na ihe ịga nke ọma enyerela ya creators mee ka ọ gaa mobile egwuregwu, nke bụ dị nnọọ ka fun. a ga-dọrọ aka ná ntị: gị mkpa abụọ Player na ọ arụnyere na ha iPhones ka ọbụna na-egwu.
Njem Ihe Egwu OF Mana
Fans nke Final Fantasy console RPGs nwere ọtụtụ ohere igwu egwu okenye egwuregwu ke nsonso on ha mobile ngwaọrụ. Adventures nke Mana bụ ọhụrụ remake - nke a egwuregwu na ihe ukporo Player nwere ike ghara ịma - na awade a yi slice of RPG akụkọ ihe mere eme.
ngụda: Official APP
Ọtụtụ ndị na-egwu Countdown on ha sofas - site na-akpọ tinyere na isi-ha na TV egwuregwu show. Ugbu a na e nwere ihe ka onye ọzọ: a ukara mobile egwuregwu, na akwụkwọ ozi na nọmba agba nakwa dị ka conundrums na-edozi. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma, gụnyere a abụọ-Player-na-otu-na ngwaọrụ mode.
n'akpa uwe MORTYS
Ị ga-enweta ọtụtụ ihe na egwuregwu a ma ọ bụrụ na ị na-ama maara na Adult igwu mmiri si Rick na Morty katuunu, ma ọ bụ fun maka newcomers kwa. Unashamedly n'ike mmụọ nsọ Pokemon, ọ na-juru n'ọnụ na ọchị dị ka ị enwetaghị ma zụọ iche iche na nsụgharị nke Morty agwa.
Chọrọ a ọhụrụ ighikota on a n'elu ikpo okwu egwuregwu? Nke a na-enye ya: gị obere stick-agwa agba na mmali gburugburu a usoro nke okirikiri, -arụ ọrụ gị ụzọ n'ime center izere iro. O yiri ihe siri ike na mbụ, ma ka ị na-eji n'afọ iri na ụma, ọ na-aghọ a gbara ọkpụrụkpụ ịma aka.
An-echepụta ọhụrụ ahụ na obodo-ụlọ atụmatụ nke ahụ na-aghọ a maara genre on mobile. Nke a egwuregwu, si ama Ịgba Cha Cha ika Atari, agba LGBTQ (nwanyị nwere mmasị nwanyị, nwoke nwere mmasị nwoke, bisexual, transgender na queer) obodo, mezue na Mpako ememme dị ka ya centrepoints.
26961	7 Android, Apps, Ngwa ọdịnala nke ọnwa, Nkeji edemede, Atụmatụ, Games, IOS, Na oi Monthly, Smartphones, Stuart Dredge, Technology, The Na
← Ọtụtụ akwara ozi Emebi Memory 4 Real efe Cars na n'ezie na Ofufe [Na] →